३३ वर्षका मेस्सीको प्रभाव अझै होला?
ऋग्वेद शर्मा बुधबार, भदौ १७, २०७७, १३:१९
काठमाडौं- स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले क्लब छाड्ने बताएसँगै अहिले विश्व फुटबल एकै ठाउँमा अड्किरहे जस्तो देखिएको छ। क्लबहरु नयाँ सिजनको तयारी र खेलाडी किनबेचमा लागिरहँदा केन्द्रमा छन् मेस्सी।
३३ वर्षका मेस्सीमाथि अझै पनि भइरहेको विश्वास र हानथाप उनको उत्कृष्टताको प्रमाण हो। गएको १५ वर्षमा उनले मैदानबाट जे देखाए त्यसैको प्रभाव अहिले फुटबल बजारमा परिरहेको छ। गएको सिजन ला लिगामा सर्वाधिक गोलकर्ता मेस्सीको प्रभाव अझै देखिइरहनु उनको शैलीकै परिणाम हो।
मेस्सी खेललाई रोमाञ्चक रुपमा प्रस्तुत गर्छन्। जितको आधार तयार गर्छन्। मैदानमा विपक्षीलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने क्षमता उनमा देखिन्छ। मैदानमा मेस्सी हुनु र नहुनुको फरक दर्शकले नै स्पष्ट देख्छन्। तर मेस्सीले गएको केही वर्षदेखि च्याम्पियन्स लिग भइरहेको खराब हारले बार्सिलोनामा नै रहिरहन अनिच्छा देखाएका छन्।
गएको सिजन गोलका आधारमा २००७-०८ पछिको खराब सिजन भए पनि उनी असिस्टमा बनाएको नयाँ कीर्तिमानले मैदानमा अवसरको खोजीमा अझ सशक्त बने। जसले उनी स्वयम गोलकर्ता मात्र देखिँदैनन् खेलको योजनाकार जस्ता लाग्छन्। गएको सिजन मेस्सीले ३१ गोल गरे। उनको २६ असिस्टले उत्कृष्ट समय देखाए पनि गोलमा बढ्ने मेस्सीको क्षमतामा टिमको भूमिका देखिँदैन।
गएको सिजन मेस्सीका लागि कमजोर मानिए पनि युरोपका ठूला पाँच लिगको हरेक तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने उनी उत्कृष्टभित्र नै छन्। चाहे गोलमा होस् असिस्टमा या स्ट्राइकरका लागि हुन सक्ने अरु केही।
गएका वर्षहरुमा भन्दा मेस्सीको गोल संख्या कम हुनुमा बार्सिलोनामा उनको फेरिएको भूमिकाको पनि ठूलो कारण छ। उनी लामो समय बलमा नियन्त्रण बनाउन मिडफिल्डबाट बढेर खेलिरहेको देखिन्थे। जसले गएका वर्षहरुमा भन्दा उनको पोस्टमा प्रहार भएको सट संख्या पनि कम नै छ।
ला लिगामा नै हेर्दा ला लिगामा दुई सयभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडीहरु नौ जना छन्। ती नौ खेलाडीमा तीन सय गोल कटाउने खेलाडी दुई जना छन्। जसमा चार सय गोल कटाउने खेलाडी एक जना मात्र छन्। यसैले सजिलै तोडिन असम्भव जस्तो लाग्ने ला लिगामा सर्वाधिक गोलको कीर्तिमान मेस्सीको नाममा छ। ला लिगामा उनले ४ सय ८५ खेलमा ४ सय ४४ गोल र २ सय १ असिस्ट गरेका छन्।
बार्सिलोनाबाट सबै प्रतियोगितामा गरेर सर्वाधिक गोल गरेका मेस्सी अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय टिमका पनि सर्वाधिक गोलकर्ता हुन्। बार्सिलोनाबाट उनले ७ सय ३१ खेलमा ६ सय ३४ गोल गरेका छन् भने अर्जेन्टिनाबाट १ सय ३८ खेलमा ७० गोल गरेका छन्।
प्रशिक्षक पेप गार्डिओलाको समयमा एक सय अंक बनाएर ला लिगाको उपाधि जितेको त्यो बेला मेस्सीको खेल लय लोभलाग्दो थियो। जुन वर्ष बार्सिलोनाको ७९ गोलमा मेस्सीले ला लिगामा ५९, च्याम्पियन्स लिगमा १३, कोपा डेल रेमा ५ र स्पेनिस सुपर कपमा २ गोल गरेका थिए। ९१ गोल गरेको त्यो वर्ष मेस्सीले २४ गोलको लागि अवसर बनाएर गोल र असिस्टको संख्या १ सय १५ र्पुयाएका थिए।
बार्सिलोनाबाट लियोनल मेस्सीले चार पटक च्याम्पियन्स लिग उपाधि जितेका छन्। च्याम्पियन्स लिगका १ सय ४३ खेलमा मेस्सीले १ सय १५ गोल र ३९ असिस्ट गरेका छन्।
यो सबै इतिहास भए पनि मेस्सीसँग अझै केही गर्न सक्ने सामर्थ्य भने देखिन्छ। यसैले उनी केही परिवर्तनको खोजिमा पनि छन्। ३३ वर्षका मेस्सीसँग अब फुटबलका लागि धेरै समय बाँकी छैन।
यत्तिका समय फुटबलको केन्द्रमा रहेका खेलाडीको अन्तिम-अन्तिम वर्ष यसरी खल्लो हुनु नमज्जा बनिरहेको छ। यसैले यसअघि चलेका हल्लाभन्दा अघि अहिले मेस्सीले क्लब छाड्ने खबर देखिन्छ। च्याम्पियन्स लिगको दयनीय र लाजमर्दो हारपछि त्यो अस्वभाविक पनि लाग्दैन।
सबै तथ्यांकलाई हेर्दा गएको सिजन मेस्सी बायर्न म्युनिकका रोबर्ट लेवान्डोस्कीभन्दा पछि देखिन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि उनले थप सम्भावनाहरु देखाइरहेकै छन्। त्यही सम्भावनाको खोजिकै लागि उनले म्यानचेस्टर सिटी जाने इच्छा देखाइरहेको हुनुपर्छ। मेस्सीसँग अब धेरै कुराका लागि समय पनि कम छ। हुन त बार्सिलोनाका पूर्वखेलाडी जाभीको कुरा मान्ने हो भने त मेस्सी ४० वर्षको उमेरसम्म खेल्न सक्छन्।
यो सबैका बीच मेस्सीले क्लब छाड्ने इच्छा देखाइरहँदा पनि बार्सिलोना उनलाई छाड्न नदिने प्रयासमा लागिरहनुले उनको प्रभाव कति छ भन्ने देखिन्छ। मेस्सीले सिजनको अन्त्यमा क्लब छाड्न सक्ने सम्झौताका आधारमा कुरा उठाइरहेका छन् भने बार्सिलोना ब्यवस्थापन उनको ७०० मिलियन युरो रिलिज क्लज नतिरी कसैले लान नपाउने बताइरहेको छ।
अहिले मेस्सीका एजेन्टसमेत रहेका उनका बुबा जर्ज मेस्सी बार्सिलोनामा छन्। उनले बार्सिलोना अध्यक्ष जोसेप मारिया बर्टामेउसँग बुधबार भेट्नेछन्। जसले धेरै विषयहरु प्रष्ट पार्नेछ। मेस्सीका लागि रोकिएको समयले गति लिँदा नै उनको खेल मन पराउनेका लागि र क्लबका लागि पनि सुखद हुनेछ। आखिर जान चाहनेलाई कसरी रोकिन्छ र! मेस्सी फेरि पनि रोकिए भने उनी पूर्णरुपमा उही हुने छैनन्। जहाँ मन छैन त्यहाँ खेल कसरी हुन्छ?